धैर्यकान्त दत्त शनिबार, चैत २१, २०७७
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने निर्णय गरेसँगै मुलुकको राजनीति फेरि एकपटक तरंगित भएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी भन्दै आएको कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाटै निर्णय गरेर राजीनामा माग गरेपछि राजनीति तरंगित भएको हो।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओली कदमको विरोध गरिरहे पनि आधिकारिक रूपमै निर्णय गरेर कांग्रेसले राजीनामा माग गरेको थिएन।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले माग गरे पनि ओलीले राजीनामा नदिने प्रष्ट संकेत दिइसकेका छन्।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले कसैले माग्दैमा राजीनामा नदिइने प्रष्ट्याइसकेका छन्। बरू सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिन उनले चुनौती दिएका छन्।
सर्वोच्चको फैसलाले नेकपालाई खारेज गरेर एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिए पनि माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको छैन। त्यसैले ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिन जरूरी ठानेका छैनन्।
तर, कांग्रेसले आधिकारिक रूपमै राजीनामाको माग गरिसकेपछि अब वैकल्पिक सरकार गठनको खेल सुरू हुने लगभग पक्का भएको छ।
नयाँ सरकार गठनका लागि अहिले दुई विकल्प देखिएका छन्। पहिलो माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनु र अर्को प्रतिपक्षी दलहरूको सहमतिमा अविश्वास प्रस्ताव।
तर, ओलीलाई विस्थापित गरेर वैकल्पिक सरकार गठनका लागि कांग्रेसभित्र सबैभन्दा बढी जोडतोडले लागेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिनुभन्दा उत्तम विकल्प देख्छन अविश्वास प्रस्तावलाई।
माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिँदा फेरि ओलीकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने र मुलुक चुनावमा धकेलिने पौडेलको तर्क छ।
‘माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिँदा ओलीले सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। उनले विश्वासको मत नपाउने लगभग निश्चित छ,’ पौडेल भन्छन्,‘त्यसपछि संविधानअनुसार ठूलो दलले सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ। ठूलो दलको हैसियतमा फेरि ओलीकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ। अनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएर मुलुक चुनावतर्फ जान्छ।’
अहिलेको विकल्प चुनाव नभएकाले तीन दलको सहमतिमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर दुई वर्षका लागि वैकल्पिक सरकार बनाउनुपर्ने तर्क पौडेलको छ।
पौडेलले भनेजस्तो प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बीच सहमतिको विकल्प छैन।
ओलीको चर्को विरोध गरिरहेको माओवादी केन्द्र अविश्वास प्रस्तावका लागि सहमत हुन धेरै समस्या नरहे पनि जसपाभित्र एकधार बन्न कठिन देखिएको छ।
जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो सुरूदेखि प्रधानमन्त्री ओलीसँग संवाद गरिरहेका छन्। रेशम चौधरीको रिहाइ, संविधान संशोधनलगायतका मुद्दामा महन्थ–राजेन्द्र पक्ष प्रधानमन्त्री ओलीसँग निरन्तर वार्ता गरिरहेको छ। र, उनीहरूको बढी झुकाव ओलीतिरै देखिएको छ।
तर, जसपाकै संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष जसरी पनि ओली सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने अडानमा छन्। ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन जसपाभित्र अडकिएको हलो फुक्न अहिले सबैभन्दा जरुरी देखिएको छ।
र, कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि यसको संकेत गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामाका विषयमा जसरी कांग्रेस एकमतले निर्णय गरेको छ, त्यसैगरी एकमतले निर्णय गर्न उनले जसपालाई सुझाव दिएका छन्।
‘संकेत होइन श्रद्धेय बाबुरामजी, प्रष्ट निर्णय गरेका छौं,’ कांग्रेसले गरेको निर्णयलाई जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष भट्टराईले गरेको टिप्पणीको जवाफ दिँदै शर्माले भनेका छन्,‘कांग्रेसको प्रशंसा गर्नुभयो, धन्यवाद छ। अब कांग्रेसले जस्तै एकतावद्ध र प्रष्ट निर्णय जसपामा गर्ने क्षमता प्रस्तुत गर्नोस्। तब बन्ने छ नयाँ समीकरण।’
यसअघि जसपाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अग्रसरता नलिँदा वैकल्पिक सरकार गठनको बाटो बन्न नसकेको आरोप लगाउँदै आइरहेको थियो। तर, कांग्रेसले आधिकारिक निर्णय गरिसकेपछि अब वैकल्पिक सरकार गठनका लागि बल जसपाको कोर्टमा पुगेको छ।
के गर्ला एमाले नेपाल–खनाल पक्षले?
नेकपा नाम विवादसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला अघिसम्म एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरू प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदच्युत गर्न खनिएका थिए। उनीहरु प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै जसरी पनि ओलीलाई विस्थापित गर्न लागि परेका थिए।
तर, सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएपछि ओलीविरुद्ध खनिएका नेपाल–खनाल पक्षले अब के गर्ला? अहिले अहम प्रश्न बनेको छ।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिलेर अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको अवस्थामा नेपाल–खनाल पक्षको भूमिका सदनमा के हुन्छ सबैका लागि चासोको विषय बनेको छ।
ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउँदा एमाले पुनर्गठन अभियानमा लागेका नेपाल–खनाल पक्षले फ्लोर क्रस गर्न सक्ने कतिपयले तर्क गरिरहेका छन्।
तर, नेपाल–खनालपक्षीय नेता रघुजी पन्त सरकार गठनमा पार्टीले गर्ने निर्णय नै मान्य हुने बताउँछन्।
आफूहरूलाई माओवादी केन्द्रसँग जोडेर हेर्न नहुने र सरकार गठनमा पार्टीकै निर्णय मान्य हुने पन्तले बताए।
‘सरकार गठनमा एमालेले जे निर्णय गर्छ त्यही मान्छौं। हामीलाई माओवादी केन्द्रसँग जोडेर नहेर्नुस्,’ शनिबार नेपाल–खनाल पक्षीय स्थायी कमिटी बैठकपछि पन्तले भने।
आफूहरू पार्टी एकता जोगाउनतर्फ केन्द्रित रहेको भन्दै सरकार गठनबारे अन्य दलहरूले गर्ने निर्णयसँग सरोकार नरहेको पन्तले बताए।
‘कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले सरकार गठनबारे आफ्नो निर्णय गर्लान्,’ पन्तले भने,‘हाम्रा लागि पार्टी एकता महत्वपूर्ण छ। हामी त्यतै केन्द्रित छौं।’